कोरोना बीमा के हो ? कसरी गर्ने ? कस्तो अवस्थामा बीमा सुविधा पाइदैन ? – Insurance Khabar
कोरोना बीमा के हो ? कसरी गर्ने ? कस्तो अवस्थामा बीमा सुविधा पाइदैन ?
प्रकाशित मिति : ७ बैशाख २०७७, आईतवार १६:५८
काठमाडौं । बीमा समितिले आजदेखि कोरोना बीमाको औपचारिक रुपमा शुभारम्भ गरेको छ । नेपालमा बीमा कारोबार गर्न अनुमति प्राप्त १८ वटा नेपाली निर्जीवन बीमा कम्पनी कम्पनी र दुई वटा विदेशी कम्पनीको नेपालस्थित शाखा कार्यालयले कोरोना बीमा पोलिसी बिक्री गर्न पाउनेछन् । तर, कोरोना बीमा पुलमार्फत जीवन बीमक संघले व्यवस्थापन गर्ने हुँदा कुनै एउटा मात्रै कम्पनीले मुनाफा वा जोखिम बहन गर्दैनन् । नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले २० प्रतिशत र बाँकी ८० प्रतिशत २० वटा कम्पनीले आम्दानी र जोखिम वहन गर्नेछन् । दुई वटा बीमा योजना एक लाख र ५० हजार रुपैयाँ बीमाङ्कको बीमा पोलिसी बिक्री हुनेछन् । एक लाख बीमाङ्कको बीमा गर्न चाहेमा प्रतिव्यक्ति एक हजार रुपैयाँ र परिवारका सबैको बीमा गर्न चाहेमा ६०० रुपैयाँ बीमा शुल्क लाग्नेछ । त्यस्तै उल्लेखित बीमा शुल्कको आधा बीमा शुल्क तिरेर आधा मूल्य अर्थात ५० हजार रुपैयाँको पनि बीमा गर्न पाइने सुविधा छ ।
कोरोना बीमामा सिंगो परिवारका सदस्यहरुको बीमा गरेमा प्रतिव्यक्ति १००० शुल्कमा ४० प्रतिशत छुट दिई रु ६०० मा बीमा गर्ने सुविधा छ । त्यस्तै कुनै कार्यालय, संस्थाले आफ्नो कार्यालय, कम्पनीभित्र कार्यरत सबै कर्मचारीहरुको बीमा गर्न चाहेमा पत्रसहित आवेदन दिँदा सो छुट पाइनेछ ।